Odaygu wuxuu weerarayaa gurigiisa, wuxuu u baxaa "sida Kool-Aid Man" markii ay booliisku yimaadaan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Odaygu wuxuu ku duulayaa gurigiisa, wuxuu u baxaa "sida Kool-Aid Man" markii booliisku yimaado - BGR
Ku rida bey dariiq lugeynaya ama ku warwareega dhabarkaaga miyiga waxay noqon kartaa xoogaa cabsi leh, laakiin waqtiga intiisa badan, waxay u qaadanayaan inay iska indhatirayaan jiritaankaaga. Qoys ku nool Estes Park, Colorado, ayaa dhowaan la kulmay orso aan dooneynin kaliya inay qol ka kireeyaan, laakiin sida muuqata waxay kaloo rabeen inay qolal ka qadaan.
Sida laga soo xigtay xarunta Fox ee maxalliga ah the KDVR wararka duulaanka ku nool afarta gees wuxuu go'aansaday inuu qabsado guri maxalli ah oo dhan ugu dambeyntiina wuu guuleystey. Booliiska ayaa markaa kadib loogu yeeray inay xalliyaan xaaladda. Markii fuzz uu yimid, odaygu wuxuu u baxsaday si cajiib ah isaga oo sigtay darbiga, isagoo isbarbar dhigaya halyeeyga caanka ah ee Kool-Aid Man.
Dhacdadan ayaa sidoo kale lagu soo sheegay bogga Facebook ee qaybta Booliska ee 'Estes Park Police', oo bixisa faahfaahin dheeraad ah.
Baadhitaan kooban ayaa lagu soo gabagabeeyey in orso ay markii hore soo jiidatay guriga sababta oo ah urinta qashinka, taas oo caan ku ah jiidashada dadka cuna cuntada bilaashka ah. Xayawaanku wuxuu ku qarxay dabaqa hoose ee guriga waxaana arkay nin deris ah oo isla markiiba la xiriiray milkiilayaasha.
Odeygii ma uusan dagaalamin booliskuna wuu yimid. Kadib waxay go’aansatay in sida ugu dhakhsaha badan ee guriga looga baxo ay tahay darbiga, taas oo keentay waxyeelo badan markii ay soo jeedday.
Saraakiisha ilaalinta xayawaanka duurjoogta waxay ku talinayaan in haamaha qashinka lagu dhaafin meelaha ay xayawaanku dhaqaaqaan, waxaana milkiilayaasha guryaha lagula taliyaa inay qaadaan tillaabooyin looga hortagayo urka qashinka ama ilaha suurtagalka ah ee qashin-qubka. cuntada ka timaadda guriga, gaar ahaan habeenkii.
Bears waa xayawaan caqli badan oo badiyaa waxay heli karaan hab ay ku galaan guriga haddii ay sameeyaan dadaal ku filan. Tallaabada ugu wanaagsan ee nabadgelyadu waa in la hubiyo inaysan dan ka lahayn gelitaanka.
Isha Sawirka: Qeybta Booliska ee Estes Park
Hawsha ESA Mars ayaa soo gabagabowday kadib tijaabadii labaad ee parachute - BGR
Mode : des caftans pour tisser des liens entre le Maghreb et le reste de l’Afrique – JeuneAfrique.com
Coworking: sida Regus ay u rabto inay labanlaabto joogitaankeeda qaaradda - JeuneAfrique.com